သငျသညျများမှာ ဝဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ် ? သင်၏ကုမ္ပဏီအလှည့်ကျနေသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့ နှင့်သင်အသစ်သောဗန်းစကားနှင့်တွဲဖက်ဖို့ရှိသည်? နည်းလမ်းအသစ်များ? သို့မဟုတ်သင်ရိုးရိုးလေးလိုချင်သည် အင်တာနက်စျေးကွက်၏အခြေခံကိုဆည်းပူး ? ထို့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုအတွက်ပရိသတ်ကိုအပ်နှံထားသောဤဗီဒီယိုသင်တန်းကိုပြုလုပ်သည်။
Lingo ကိုလေ့လာပြီးသင်၏ Web Marketing မဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးပါ
ဤသည်၌ လေ့ကျင့်ရေးငါသည်သင်တို့ကိုအဘယ်သို့သောလမ်းကိုရှောက်သွားလိမ့်မည် ဝဘ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပင်ရောင်းလိုသောကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏ပုံသဏ္seeာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရလိမ့်မည် ဒီမဟာဗျူဟာကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့်လီဗာအနည်းငယ်ကိုသက်ဝင်စေရန်ရရှိနိုင်သည့်လက်နက်အားလုံး။
အဆိုပါသင်တန်းအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြားထားတယ်။ ကျနော်တို့ကနေစတင်ပါလိမ့်မယ် အခြေခံ…
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာကိုဖန်တီးပါ ဒီဇင်ဘာလ 28, 2020Tranquillus
ဖတ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ကျန်းမာရေးပရိုတိုကော- ဖေဖော်ဝါရီ 16၊ 2022 တွင် မည်သည့်အပြောင်းအလဲများရှိသနည်း။